Orinasan-tsolika solika an-dranomasina, mpamatsy - mpanamboatra fantsona solika an-dranomasina Shina
Fanamboarana sy fitaovana lehibe Fitaovana lehibe / fantsona anaty fatin'ny kodiarana: malefaka, solika ary solika tsy manadinadinana ary vita amin'ny «Acrylontrile Butadiene Rubber» (NBR); Saron'ny fiarovana: fananganana manokana hisorohana ny kilema na fahasimbana ateraky ny fahavakisan'ny fahavoazana na ny fahasimbana ambonin'ilay firakotra lehibe; Fanamafisana: Plies marobe amin'ny tadin'ny lamba mitafy avo. Tariby vy vy iray napetraka iray. Faty tokana sy fatin'olon-tokana any ivelany: fonosana mainty, fingotra vita amin'ny synthetic manohitra ny abrasion, ...
Mainline Submarine Tube miaraka amin'ny collars
Fanamboarana sy fitaovana lehibe Fitaovana maintso / fantsona anaty fatin-kibo: malefaka, menaka ary solika tsy misy sotasota vita amin'ny Acrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Sarom-piarovana: fananganana manokana hisorohana ny kilema na fahasimbana ateraky ny fahavakisan'ny lozam-pifamoivoizana na ny fahavoazana ambonin'ilay lamba lehibe; Fanamafisana: Plies marobe amin'ny tadin'ny lamba mitafy avo. Tariby vy vy iray napetraka iray. Faty tokana sy fatin'olon-tokana any ivelany: fonosana mainty, fingotra vita amin'ny synthetic manohitra ny abrasion, O ...
Sakan-dranomasina miaraka amin'ny fanamafisana farany
Fanamboarana sy fitaovana lehibe Fitaovana maintso / fantsona anaty fatin-kibo: malefaka, menaka ary solika tsy misy sotasota vita amin'ny Acrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Sarom-piarovana: fananganana manokana hisorohana ny kilema na fahasimbana ateraky ny fahavakisan'ny lozam-pifamoivoizana na ny fahavoazana ambonin'ilay lamba lehibe; Fanamafisana: Plies marobe amin'ny tadin'ny lamba mitafy avo. Tariby vy vy iray napetraka iray. Faty tokana sy fatin'olon-tokana any ivelany: fonosana mainty, fingotra vita amin'ny synthetic manohitra ny abrasion, ...
Hazo iray any an-dranomasina nanamafy ny fantsom-pandrefesana misy sambo
Fanamboarana sy fitaovana lehibe Fitaovana maintso / fantsona anaty fatin-kibo: malefaka, menaka ary solika tsy misy sotasota vita amin'ny Acrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Sarom-piarovana: fananganana manokana hisorohana ny kilema na fahasimbana ateraky ny fahavakisan'ny lozam-pifamoivoizana na ny fahavoazana ambonin'ilay lamba lehibe; Fanamafisana: Plies marobe amin'ny tadin'ny lamba mitafy avo. Tariby vy vy iray napetraka iray. Faty tokana sy fatin'olona roa sosona ivelany: mainty malefaka, fingotra vita amin'ny synthetic manohitra an'i Abras ...
Fantson-tsolika solika dock / cargo Fampiharana fantson-tsolika dock dia natao ho an'ny ain'ny serivisy faran'izay betsaka amin'ny vokatra solika ary famindrana solika voadio hatramin'ny 300 tosika amin'ny serivisy 300 PSI. Ity famolavolana fantsom-by ity dia mahasoa raha tadiavina ny tsindry miasa avo kokoa na ny rindrina mavesatra kokoa ho an'ny fanakorontanana. Ny fantsakan-tseranana dia hosoka adidy mavesatra ary fantsom-panafahana natao hivezivezy eo anelanelan'ny barika sy ny fiara fitahirizana ary ny sambon'ny ranomasina. Ireo fantsona ireo dia mampiditra fantsom-pandrosoana noforonina manokana hanoherana ny haino aman-jery hatramin'ny 50-100% contenitra manitra ...
Fantsona solika dock / cargo Dock oil Transfer Tube: Tube: Black: malama, malama, Nitrile synthetic rubber, mety hatramin'ny 50% atiny manitra. Fanamafisana: Tady kofehy synthetic adidy mavesatra mavesatra tohanan'ny tariby helix, tariby anti-static. Fonony: Mainty, fonosana vita amin'ny fonosana, fingotra sentetika ho an'ny avo lenta, ozon ary fanoherana ny toetr'andro. Temperature mety: -40 ℃ hatramin'ny + 100 ℃ (180 ℉) Antoka azo antoka: 5: 1 Toeram-pivarotana solika dock mampiavaka: flanges vita amin'ny C / W misy sisiny miorina ary lafiny iray swi ...